Mpifaninana ho solontenan’ny mpirotsaka an-tsitrapo ao amin’ny filankevipitantanana GV 2020: Kevin Rennie · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Avrily 2020 13:23 GMT
Kevin Rennie. Sary: Jer Clarke (CC-BY-NC)
Kevin, mpampianatra tamin'ny ambaratonga faharoa saingy efa nitsahatra, ary monina ao Melbourne, Aostralia amin'izao fotoana izao. Sendikalista sady mpikambana ao anatin'ny antokon'ny mpiasa ao Aostralia hatramin'ny 1972, nandany taona marobe nampianatra tany amin'ireo Faritany Avaratra, ao Katherine, ary tao Maningrida, nanaraka vondrompiarahamonina teratany tao Arnhem Land. Ny Desambra 2008 i Kevin no nirotsaka ho GVer sy nandray anjara indrindra indrindra ho toy ny mpanoratra tao anatin'ny tarika tao amin'ny faritra Azia Atsimo Atsinanana ary Oseania.
Ireo rehetra nirotsaka ho fidiana ho ao anatin'ny filankevipitantanana 2020 dia nasaina namaly ireo andiana fanontaniana vitsivitsy eto ambany. Aza misalasala mametraka fanontaniana fanampiny amin'i Kevin, atao ao anatin'ny toerana ho an'ny fanehoankevitra amin'ity lahatsoratra ity!!
Ny fahafahana miasa miaraka amin'ity vondrompiarahamonina tsy mampino ananantsika ity mba hanakaikezana tontolo iray izay tena mila fatratra ny fisian'ireo feo tsy miankina.
Amin'ny maha-mpampianatra / mpianatra ahy, mpamaha olana aho, olona mpiasa anaty tarika ary olona.
Ao anatin'ny traikefako ny asa fanoratana ety anaty aterineto, ny famokarana lahatsary sy fanaovana fikarohana miharo fanadihadiana. Somary mahay kely ny resaka teknolojia ihany aho, na tsy tena mahafehy betsaka azy aza.
Ny tambajotra midadasika ananako dia ahitàna ireo mpikatroka liampivoarana sy ireo vondrompiarahamonina toy ireo izay miaro ny zon'olombelona ny tontolo iainana ary fahalalahana nomerikantsika. Ao anatiny ireo mpanao gazety sy mpanao sariitatra, na avy amin'ny media tranainy na ny vaovao. Manana fifandraisana tsy tapaka amin'ireo vondrompiarahamonina voakasiky ny resaka zon'ireo teratany sy mpialokaloka. Ny fisoloana tena ny GV matetitetika amin'ireo kaonferansa, atrikasa sy hetsika natao ho an'ny daholobe.
Ny firehetampoko hahita fomba vaovao dia mifanaraka amin'ny fitoniana sy ny fahaiza-mikarataka. Nahazo fahalalàna misimisy kokoa momba ny vondrompiarahamonintsika aho tato anatin'ny 11 taona farany. Voarakitra ato ny zavatra nainako niaraka tamin'ny GV https://community.globalvoices.org/2017/03/gv-board-elections-2017-kevin-rennie/
Sehatra iray maika ny fametrahana ny jeritodika, indrindra fa ny famantarana ireo sehatra atao laharampahamehana ho an'ireo tantara soratanao. Ilaintsika ny manatsara ny fifandraisana sy ny fifampizaràna eo amin'ny samy mpanoratra sy mpandika lahatsoratra. Tsy maintsy irosoana ny fampahafantarana ity vondrompiarahamonintsika maro fiteny ity sy ny tantarantsika. Tsy maintsy trandrahantsika ireo fomba hahatrarana ireo olona tena mendrika hiantefan'ny asantsika, sy manao izay hahalasa azy ireny ho mpitsidika tsy tapaka.
Tamin'ny volana lasa iny, raha ny isan'ny mpitsidika ny tranonkalantsika amin'ny teny anglisy dia 75% mihoatra noho ny salanisan'ny isambolana teo aloha hita tamin'ny taona lasa, ary 50% betsaka kokoa noho ny fitsidihana pejy hatramin'ny nanombohan'ny GV. Mila maka lesona avy amin'ny fandrakofana manokana sy tokamiavaka ataontsika amin'ny krizin'ny COVID-19 isika, ary mitrandraka fomba misy fahaizamamorona amin'ny resaka fampandraisana anjara ny mpanjohy antsika. Hitàna anjara andraikitra goavana amin'izany ny Lingua, mandritra sy aorian'ilay valanaretina, amin'ny fanatrarana mpamaky betsaka araka izay tratra.
Zavadehibe ny hanohizantsika ny fandrakofana tantara maro karazana, fanampin'ireo krizy misy amin'izao fotoana izao.
Ny trano famoahambaovao no fon'ny fandraisako anjara amin'ny GV. Miha-mavitrika hatrany aho miaraka amin'ny Advox, izay mifamatotra amin'ny asako momba ny zon'olombelona.
Misy fahalinana tsy mitsahatra ny mitombo ihany koa amin'ny fampiasantsika ny media sôsialy.
Ny fomba fijery matianina ny fahasarotan'ny asam-pikambanana. Ny finamànana – “mateship” hoy isika izay.
Tontolo andro aho no olontsotra mpanao gazety.
Ny filankevipitantanana GV sy ny vondrona google ananantsika, ny imailaka ary ny media ety anaty aterineto dia fitaovana vitsy monja ihany hanangonana ny filàna sy ny sosokevitr'ireo GVers ary hanaovana tatitra tamberina. Loharano tsy dia tsara trandraka loatra ilay bilaogin'ny vondrompiarahamonintsika. Afaka hanatsarana ihany koa ny asantsika ireo vondrona manaraka tarakevitra, lohahevitra na olana. Tsy maintsy jerentsika ihany koa ny hanaovana fihaonambe virtoaly iray mba hifampizaràna hevitra sy traikefa.